CHERRY OO GURIGA LAGU QALAJIYEY: CUNTO KARINTA CUNTADA FOORNADA IYO QALAJIYAHA KORANTADA - WIXII MARTIDA
Jeeriga la qalajiyey: sida loo qalajiyo foornada iyo qalabka korontada?
Iyadoo ay ugu wacan tahay dhadhanka ugu fiican iyo carafka, iyo sidoo kale hantida cajiib ah ee faa'iido leh, Cherry si adag ujirta mid ka mid ah meelaha ugu horreeya oo ka mid ah berry caanka ah.
Caanno badan oo ka mid ah kuwa takhasuska leh ayaa la qalajiyey jeeriga, taas oo ka dib marka geedi socodka ka shaqeeyaa uu hayo dhadhankiisa, iyo hodan ku jira fiitamiinada. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo qalajiyo jeeriga guriga.
Cherry qallalan waa daaweyn gaar ah sida ku qeexan nooca qalajinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farqi u dhaxeeya labadan hab ee soo iibsiga, sida loo kaydiyo:
qalajinta waxay dhacdaa maqnaanshaha (ama ka qayb qaadashada yar) kuleylka;
in habka lagu qalajiyo waxaa jira qallal aan dhamays tirnayn, kaas oo u oggolaanaya inuu berry u dhigo jilicsanaanta iyo dabacsanaanta.
Marka qalajiyo cherry wuxuu ku dhowaadaa dhammaan nafaqooyinka, iyo waxay yihiin cajiib ah miro yar. Sidaas, berry qallalan waxaa ku jira:
yaryar iyo macruufiyeyaasha - potassium, sodium, cobalt, magnesium, kalsiyum, fosfooraska, birta, naxaasta;
fitamiinada - PP, C, A, E, B1, B2, B9, folic acid;
tannins, walxaha yar-yar.
Intaa waxaa dheer, marka la qalajiyo, anthocyanins iyo bioflavonoids waa la ilaaliyaa - walxo kulul ee siinaya midabka cherry. Xeryoodyadani waxay leeyihiin waxyaabo ka hortag ah anti-bararka iyo antioxidant..
Melatonin waa shay dabiici ah oo dabiici ah oo nuujinaya maskaxda maskaxda.
lutein, beta-carotene iyo Zea-xanthine, kuwaas oo sidoo kale lagu kaydiyaa cherry ka dib markii processing, waxay ku lug leeyihiin ilaalinta jirka ka soo xor ka ah lacag la'aan, joojiyaan da'da unugyada, yareeyo khatarta ah in la sameeyo cudurada wadnaha.
Isticmaalka joogtada ah ee jeeriga ee xilliga ay Bisaylkiisa, iyo sidoo kale jeeriga qalalan xilliga dayrta-qaboobaha, yaraynaysaa halista kansarka.
Cherry waxaa loo isticmaalaa ka hortagga istaroogga, sameynta jimicsiyada kolestaroolka, xinjiro dhiig, dhiig yaraan. Maaddaama ay ka kooban tahay bucroolka folic acid, waxaa lagula talinayaa haweenka inta lagu jiro uurka iyo dhiigbaxa caadada culus.
100 g oo badeecada ka kooban:
borotiinada: 1.5 g;
qiyaasta kalooriga: 293 kcal.
Si habsami ah Si aad u jilciso jeeriga guriga, berry waa inuu marka hore diyaariyaa:
bustada, baabi'iyo jarjaraha la jarjaray iyo qashinka;
Gacmaha raaci biyo qabow (waxaad ku dhaqi kartaa baaquli, kaliya kiiskan, biyaha waa in la badalaa dhowr jeer);
si loo kala saaro berry ka soo saarka, lafaha (adigoo isticmaalaya hab gaar ah, ama waxaad isticmaali kartaa pin ama pin);
gelin cherry nadiif ah ee weel matoor ah oo ay ku rusheeyaan sonkorta (2 kg oo ah gawsaha la jarjaray 800-1000 g oo sonkor ah).
Berry-macaan Waxaad u isticmaali kartaa dhowr siyaabood, habka diyaarinta taas oo isku mid ah.
Cherry ayaa ku qalajisay guriga, eeg sawirada hoose.
Taas ka dib sida cherry lagu rusheeyey sonkorta waa in lagu hayaa maalin maalin heerkul ah 20-25 digrii ee sii deynta dareeraha
Juice soo jeediyey waa in la miiray, tuurin cherry galay Colander ah.
Diyaarso sharoobada sonkorta, qaadashada (qiyaasta 2 kg ee berry aan lahayn abuur) 700 ml oo biyo ah iyo 600 g oo sonkor ah. Ku rid cherry ee sharoobada karkaraya iyo isku kari ilaa 5-7 daqiiqo..
Mar labaad, kari si aad u jilciso on shaandho si ay u tirtiraan dareeraha xad-dhaaf ah.
Ku qabow heerkulka qolka iyo meel dusha sare ah (tusaale ahaan, saxanka dubista) hal lakab, ka dibna ka saar meel gudcur ah oo qalalan.
2-3 maalmood ka dib kasta cherry berrida waa in loo soo jeestaa oo tagaa 7-10 maalmood oo kale.
Nidaamka tirada 2
Xaaladdan oo kale, jeeriga la rusheeyey si ay u muujiyaan casiir ku dhaaf heerkul ah 4-5 digrii 3 maalmood.
Nidaamka dheeraadka ah wuxuu la mid yahay habka ugu horreeya.
Nidaamka habka 3
Habka ugu dhakhsaha badan ee ugu caansan ee daaweynta guryaha ayaa lagu daaweynayaa foornada. Ka dib markii diyaarinta caadiga ah ee miro, halkii geeddi-socodka 2-todobaad ee hawada, 3dii saacadood ee wax lagu qabanayo jikada.
Sidaa daraadeed, badeecada la kariyey ee sharoobada waa in lagu dhajiyaa xaashi dubista hal lakab oo gaas (ama fiilada) foornada kuleyliya ilaa 80 darajo 30-32 daqiiqo.
Ka dib markii cherry qaboojiyey, waa in si tartiib ah loo soo jeestaa oo dib loo dhigaa 30 daqiiqo oo kale.
Hawlaha dheeraadka ah ee la midka ah waxa la fuliyaa 1-2 jeer, laakiin horeba heerkul ah 65-70 digrii.
Ha dhaafin heerkulka iyo waqtiga, sababta oo ah cherry ayaa aad u qalalan.
Shaqaalaha guriga casriga ah waxay u isticmaalaan qalajinta iyo qalabka sidasida qalajiyaha korantada. Hannaanka, sida foornada, waxay qaadataa waqti yar, oo leh farqi u dhexaysa jihada wanaagsan: ma jirto baahi loo qabo in la gaaro, qaboojiyo oo leexiyo berry.
Qalabkuna wax walba ayuu sameeyaa. Ku ridista cherry galay qalabka korontada iyo doorashada xaraarada heerkulka (moodeel kasta waxay leedahay xaaladeeda, sidaas darteed waxa fiican in la tilmaamo tilmaamaha qalabka), kadib 10-12 saacadood waxaad dhadhamin kartaa dhadhanka weyn ee sheyga.
Dhadhanka jiilka la qalajiyey waa mid aad u wanaagsan, lakiin waa la hagaajin karaa. Tusaale ahaan Dadka jecel qorhaha ayaa qadarin doona doorashada karinta xiga.:
geedka la jarjaray - 1000 g;
sonkorta - 450 g;
1 casiir liin leh;
qorfe - 2 tsp.
Habka diyaarinta iyo toosinta qallajinta kama duwana habka caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, marxaladda ku shub sonkorta galay berry, ugu dambeyntii ku dar qoriga dhulka oo ku dar roodhida casiir liin leh. Kadib dhammaan marxaladaha qalajinta, cherry ayaa dhadhan roodhida leh.
Halkii laga cuno qori, waxaad isticmaali kartaa cunnooyinka dhulka, ama xilliyada kale ee dhadhankaaga.
Kaydinta alaabada la dhamaystiray waxaa lagu sameeyey weel dhoobo si adag u xiran. qolka mugdiga leh qoyaan qaraabo ah oo ah 60-70%, heerkulka waa inuusan ka badneyn 12-18 darajo.
Waxa kale oo suurtogal ah in lagu ilaaliyo berry muddo dheer (in ka badan 1 sano)adigoo ku ridaya bac warqad ah kadibna bacliinka polyetylen.
Akhri walxo kale oo ku saabsan qaboojinta, qalajinta iyo kaydinta jeeriga.
Sidaas darteed, si naftaada loo siiyo fiitamiin iyo macdano dabiici ah sanadka oo dhan, waxaad kaliya u baahan tahay inaad waqti ku qaadato wakhti iyo dadaal ku saabsan diyaargarowga geedka la qalajiyey.
Haa, geedi socodku ma aha mid degdeg ah oo dhib badan, hase yeeshee xoogagga maalgashiga ayaa dib u bixin doona dulsaar.